Xukuumada Somalia oo soo dhaweysay safiirka USA – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay qorshaha Mareykanku safiir ugu soo dirsanayo Soomaaliya kadib in ka badan 20 oo aysan USA safaarad ku laheyn Muqdisho.
Soo dhaweynta xukuumadda waxaa ka horreeyey soo dhaweynat madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud, kaasoo sheegay iney hubtaal tahay in madaxweynaha Mareykanka Obama safiir usoo magacaabayo Soomaaliya.
Golaha wasiirrada oo shirkoodii caadiga ahaa ku soo dhaweeyay qorshaha ay dowladda Maraykanku safiir ugu soo magcaabayso Soomaaliya, tallaabadaasi oo kor u qaadaysa xiriirka dublamaasiyadeed ee ka dhexeeya Muqdisho iyo Washington.
“Xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanku waa mid muddo soo jiray oo lahaa maalmo wanaagsan, waxay labada Qaran ay maanta diyaar u yihiin inay xoojiyaan xiriirkaasi oo faa’iido wadajir ah u leh. Tallaabadani waxay muujinaysaa inay Soomaaliya dib u soo ceshanayso kaalinteedii caalamka,” ayuu yiri Raysul wasaare C/weli Sheekh.
Isagoo sii hadlaya ayuu yiri: “Xiriirka dublamaasiyadeed ee labada dal waa mid muhiimad u leh labada shacab si la is kaga kaashado dhinacyada muhiimada wadajirka ah leh. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabo la mid ah tan Maraykanka oo lagu adkaynayo cilaaqaadka dublamaasiyadeed ee labada ummadood.”
“Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay xiriir dublamaasiyadeed oo wanaagsan la yeelato beesha caalamka si ay gacan uga geysato waajibka caalamiga ah ee saaran iyo u adeegista danaha Soomaaliya iyo masaalixda la wadaago ee dalalka iyo adduun-weynahaba,” ayuu hadalkiisa ku daray.